Ama-Chives kucatshangwa ukuthi avela e-Asia naseMpumalanga Yurophu. Namhlanje ama-chives ahlwanyelwe emhlabeni jikelele.
Igama lesayensi: Allium schoenoprasum
Igama elivamile: Chives
I-Chive ihlobene ne-anyanisi futhi inamaqabunga afana no-anyanisi kodwa aphelile. Amaqabunga ayesigxilile, angenalutho futhi aphethwe amathiphu. Isitshalo singakhula sibe ngu-50 cm futhi sibe nezimbali ezibomvu ezibomvu.
I-Chives isetshenziselwa ukupheka kanye nama-salad aluhlaza. I-Chives ingabuye ifakwe emafutheni okunambitheka.
Ama-Chives akhula kahle kakhulu emhlabathini, ocebile owudla kahle. I-pH yenhlabathi kufanele ibe phakathi kuka-6 no-7.
Ngaphambi kokuba kulungiswe umhlabathi, isampula emele umhlabathi kufanele ithathwe futhi ithunyelwe ebhokisithri ukuze kuhlaziywe kanye nezincomo zokudla. Umhlabathi kufanele ukhululeke iphrofayli yomhlabathi ibe ngu-500 mm. I-lime ye-pH yokuvuselela futhi umquba noma umquba kufanele usetshenziswe futhi uhlonywe emhlabathini ophezulu ka-400 mm cishe amasonto amane kuya kwahlanu ngaphambi kokutshala. Ezinsukwini zokugcina ngaphambi kokutshala, engeza izici zokulandelela kanye nomanyolo olinganiselwe wokutshala emhlabathini kanye ne-disc noma i-rotavator enhlabathini engaphezulu kuka-20 cm. Lokhu kuhlanza noma yikuphi ukhula olungase lubekwe. Ukugibela kuyenzeka ngalesi sigaba futhi imbewu yenzelwe ukutshala. Uma ukutshala izithombo, ukuhlanganiswa kwepulasitiki kungenziwa ngaphambi kokutshala ukuze ulawule ukhula olugcwala izitshalo ezincane.
Ama-Chives akhula kahle ezindaweni ezipholile futhi ikhule kahle kakhulu emazingeni okushisa aphakathi kuka-18°C no-28°C. I-Chives iyanqanda amaqhwa, kepha ukukhula kuyashesha lapho amazinga okushisa ehla kakhulu.
I-Chive evamile iyithandwa kakhulu. Kukhona izinketho ezintsha zokulima ezivumela ukukhiqizwa kwamaqabunga aphezulu. Izinhlobo ezihlukahlukene zaseFinnish ezibizwa ngokuthi 'Hankoniemi', izinhlobo ezihlukahlukene zaseDutch ezibizwa ngokuthi 'i-Tavallinen' kanye nomlimi waseJalimane okuthiwa 'i-Grolau' yizinye zezinhlobo eziphakeme ezithelayo.